Toekarena sy Fandraharahàna · Septambra, 2018 · Global Voices teny Malagasy
Toekarena sy Fandraharahàna · Septambra, 2018
Tantara mikasika ny Toekarena sy Fandraharahàna tamin'ny Septambra, 2018
Alemaina 24 Septambra 2018
Ny famelezana farany tamin'ny fanentanana nataon'i McCain dia toa mihodina manodidina an'io teny mandratra manomboka amin'ny teny "S" io - sahala amin'ny ao anatin'ny hoe "Obama dia Sosialista". [...] Maro amin'ny olona eto no mino fa mitovy lanja ny sosialisma sy ny rafitra kaominista. Omaly, tao anaty trano etiopiana iray fisotroana kafé ao amin'ny faritra misy ahy ao Washington DC, valaka aho nanazava tamin'ireo mpividy vitsivitsy
Japana 23 Septambra 2018
Amerika Avaratra 22 Septambra 2018
Mali 13 Septambra 2018
Raha hiverina ao Shina ny Google, dia hanaraka ny fepetran'ny governemanta. Dia ahoana ny zon'olombelona?
Azia Atsinanana 07 Septambra 2018
Mety miomana hanisaka ny fitsipiky ny zon'olombelona ahafahany miditra amin'ny tsena shinoa ny Google. Saingy mbola miankina amin'ny governemanta shinoa hatrany no hananany zo hiditra amin'ny tsena.